Ny rohy mampifandray mahazatra ho an'ny mpamokatra andian-dahatsoratra ANSI, mpamatsy, mpanamboatra - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, mpanova, kojakoja helikaly, faribola vy bevelta, boaty fambolena, kodiarana traktera, giratra kamiao
Mampifandray rohy tranokala - Press Fit (BS / DIN / ANSI)
Ny rohy mampifandray mahazatra ho an'ny rojom-bolo azo zahana an'ny ANSI, ampiasaina amin'ny rojo vy misy ny hafainganam-pandeha lehibe na toe-javatra sarotra. Natolotra tamin'ny tsimatra roa nampifandraisina tao anaty vilia ivelany, misy takelaka ivelany hafa ankehitriny izay tsindry an-tsokosoko amin'ireo pin ary natsangan'ny tsimatra mizara taorian'ny fivorian'ny. Ny rohy fampifandraisana fampitam-baovao dia azo ampiasaina raha tsy; hyperlink vaovao dia tsy maintsy ampiasaina foana hanoloana rohy rava.
Hafa noho ireo rojo manokana n'aiza n'aiza n'aiza ny hyperlink cranked dia azo antoka fa fomba fanao sy endrika famolavolana, ny rohy mirindrina dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny alàlan'ny lozam-pifamoivoizana. Ity fomba fanao ity tsy aroso; ny mpamily rehetra dia tokony, na aiza na aiza azo tratrarina, haorina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ankapobeny ampy hahazoana antoka fa mampiasa jiro marobe isaky ny rojo. Aza mitady hampiasa rohy voahitsakitsaka amina fiara mitondra fiara mandeha mafy, na mitondra haingam-pandeha.
Rohy iray misy rohy misy takelaka cranked nopetahana tamin'ny roimemy sy rouler no mivory amin'ny farany tery. Ny paingotra mampifandray mifandraika (No. 128) dia apetraka amin'ny faran'ny malalaka ary azo antoka amin'ny tsimatra mizara.
Cranked Hyperlink Double (BS / DIN) Hyperlink Offset roa (ANSI)
Ny backlinks cranked roa dia azo jerena amin'ny ankamaroan'ny habe sy ny karazana rojo. Ny singa dia misy rohy hyperlink anatiny (No. 4), miaraka amin'ireo rohy miolakolaka mitazona tanteraka amin'ny toerany amin'ny alàlan'ny tsipika misy rivet. Ny estraktera miasa dia manapaka rojo vy amin'ny alàlan'ny fanerena ny tendrony mitondra malefaka farany amin'ny takelaka hyperlink ivelany. Ho an'ireo mpanamboatra rojo hafa, ny famonoana rivet dia tokony halefa voalohany.